कम्युनिष्ट बिग्रिए भने कुहिएको अण्डाभन्दा बढि बिग्रिन्छ भन्थे, माधव नेपालको त्यही हविगत हुँदैछ : सूर्य थापा – Butwal 24 News
August 29, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on कम्युनिष्ट बिग्रिए भने कुहिएको अण्डाभन्दा बढि बिग्रिन्छ भन्थे, माधव नेपालको त्यही हविगत हुँदैछ : सूर्य थापा
नेकपा (एमाले) का युवा नेता सूर्य थापाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानबमोजिम आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले सभामुख सापकोटा र निर्वाचन आयोगको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी कानूनी उपचारमा जाने पनि स्पष्ट पारे । शुक्रबार नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सभामुख सापकोटालाई आफ्नो पार्टीले उनको आफ्नो धरातल देखाइदिने कुरा गरेको हो पनि बताए । प्रस्तुत छ नेता थापासँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय समिती बैठकले सभामुखविरुद्ध सशक्त रुपमा जाने निर्णय किन ग¥यो ?
कसलाई भन्नुभयो त्यो ? दाँत दुखेर म बिजोग भएँ भनेर अभिनय गरेर कार्यालय पनि नगएर उहाँ त अहिले बेपत्ता हुनुभएको छ । त्यो सबै गलत हो ।
उहाँले सहयोग गर्ने/नगर्ने उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो । उहाँ त केन्द्र सरकारबाट केपी शर्मा आलीलाई हटाई छाड्ने, लुम्बिनीबाट शंकर पोखरेल र गण्डकीबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाउने माग चार वर्षदेखि गर्नुभयो । हटाएरमात्र छाड्नुभयो । नहटाउदाँसम्म श्वाँस फेर्नुभएन । कम्युनिष्ट बिग्रिए भने कुहिएको अण्डाभन्दा बढी बिग्रिन्छ भन्थे माधव नेपालको त्यही हविगत हुँदैछ । नेकपा एमालेका बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्री बनाएका हुन र उहाँहरुले टिकाउँछन् । त्यहीअनुरुप उहाँहरुले काम गर्नुहुन्छ ।